Mpanamboatra fampisehoana LED - JYLED
Ny endri-javatra JYLED
Fanomanana haingana sy mora
Ampifandraiso tsotra izao ny Ecran LED amin'ny fitaovana rehetra ary tantano avy hatrany ny atiny miaraka amin'ny rindrambaiko LED, ary ny ekipanay matihanina dia afaka manampy anao amin'ny fanaraha-maso lavitra sy hampianatra anao ny fomba hanaovana izany.
Ny efijery fampirantiana notarihina dia mora kokoa sy mahomby mba hanampiana anao hifehy sy hampiseho ny atiny tianao, na efijery video avo lenta na sary tsara tarehy, tsy sarotra amin'ny fampisehoana LED.
Afaka mandefa izay fampahalalana momba ny dokam-barotra sy horonan-tsary fampiroboroboana manintona ny mpanjifa kendrena ary mampitombo ny tombony. Ny efijery LED ara-barotra no safidy voalohany ho an'ny dokam-barotra amin'ny orinasa hahatratrarana io tanjona io.
Tsy misy fanjifana miafina
Avy amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fametrahana ary koa ny mpanjifa mitohy sy ny fanohanana ara-teknika, mitantana mora foana ny efijery LED nomerika miaraka amin'ny rafitra vidinay tsotra ary tsy misy vidiny fanampiny.
Fidio ny vokatrao
Ecran LED fanofana ivelany
raikitra ivelany efijery efijery
FIRAISANA FAMPISEHOANA NY TARIKA TANANA LED
EKARENA FAMPISEHOANA NY ZAVA-ZAVATRA LED
Raha Vonona Hahazo Rindrina Vidéo LED Ianao dia tianay ny hihaino anao!
Fidio ny sehatra fampiharana anao
Ireto misy scenario fampiasa mahazatra
Ecran Tile Floor LED
Ahoana no hanaovana ecran led 3D?
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny fangatahana dokam-barotra ivelany dia nitombo hatrany, ary ny teknolojian'ny efijery lehibe LED ivelany dia nitohy nitombo.
Fampisehoana LED tsara tarehy VS fampisehoana LED mini VS fampisehoana LED micro
2020 no ho taona voalohany amin'ny fampiratiana micro LED. Voalaza fa ny orinasa nampiasain'i Apple dia hanome fampisehoana LED micro ho an'ny Apple Watch amin'ny 2023: ity farany dia hanana tombony lehibe toy ny famirapiratana avo.
Ahoana ny fomba hanangonana module LED ao anaty boaty LED
Betsaka ny mpanjifa manana fahaiza-manao matanjaka, izay liana amin'ny fomba nanangona ny maody LED? Te hianatra sy hanangona azy irery aho. Avy eo isika dia hanomboka amin'ny fanasokajiana ny boaty
Inona ny LED Abnormity Screen? Karazana inona no misy?
Misy efijery mangarahara P3.91 LED mangarahara tanteraka ve?
Inona avy ireo fomba fametrahana ny P2.976 mangarahara LED fampisehoana?
LED kely VS Mini LED
Tsara kokoa noho ny LCD ve ny LED?
Fampisehoana kely LED VS LCD splicing screen